Tag: ecommerce sosialy | Martech Zone
Tag: ecommerce sosialy
Avereno jerena ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fifamoivoizana sy ny varotra
Talata, Aprily 26, 2016 Talata, Aprily 26, 2016 Douglas Karr
Manohy mampianatra ireo orinasa momba ny angano fanavakavahana sy ny fiatraikany tsy nisy nitateran'ny media sosialy tamin'ny ezaka ara-barotra izahay. Satria tsy ampy ny teknolojia ary sarotra ny manondro ny varotra amin'ny haino aman-jery sosialy dia tsy midika hoe tsy nitranga izany. Raha ny marina, ny antontan'isa dia miresaka mifanohitra amin'izany: ny 71% amin'ireo mpanjifa dia azo inoana kokoa ny hanao fividianana mifototra amin'ny fampahalalana media sosialy 78% ny valinteny dia nilaza fa misy fiantraikany amin'ny lahatsoratr'izy ireo ny media sosialy
Alatsinainy, Novambra 23, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Zavatra iray ny manao dokam-barotra amin'ny alàlan'ny media sosialy ary mamerina ny olona hiverina amin'ny tranokalanao, fa ny sehatra media sosialy dia mitady hampanakaiky kokoa ny fiovam-po ary hifehy azy ireo bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ireo mivantana amin'ny sehatra misy azy ireo. Ho an'ireo mpamatsy e-varotra dia hetsika azo andraisana andraikitra ity satria sarotra ny refesina ary mahita valiny tsara amin'ny fampiasam-bola amin'ny media sosialy miaraka amin'ny fiovam-po. Ny fanamby sy ny fanamelohana dia mitohy ho fanamby. Mazava ho azy, ho an'ny media sosialy
Raha tany amin'ny IRCE aho, dia faly erỳ rehefa nanakana ahy ny mpandahateny iray, Danny Gavin, ary nilaza tamiko fa nahita ahy niteny tamin'ny taona lasa teo tamina hetsika iray tany Austin. Danny dia iray amin'ireo mpivarotra an-tserasera… manangana doka amin'ny marketing amin'ny Internet sy amin'ny media sosialy ho an'i Brian Gavin Diamonds. Miaraka amin'ny fahaizany dia nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny BGD ho eo amin'ny laharan'ny orinasa mpivarotra e-varotra an-tserasera miisa 1000 sy 50 haingana indrindra izy. Haverinay
Famerenam-bidy ara-tsosialy: valiso ny mpanjifanao rehefa mizara izy ireo
Alarobia, Novambra 20, 2013 Alarobia, Novambra 20, 2013 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny olona dia manolotra fihenam-bidy sy tolotra hahazoana mpanjifa vaovao. Adalana ity rehefa mieritreritra momba azy ianao, ahoana ny amin'ireo mpanjifa manome valisoa izay efa mandany vola? Raha ny marina, ahoana ny amin'ireo mpanjifa manome valisoa izay mizara ny zava-misy fa novidiny taminao tamin'ny tambajotra sosialy izy ireo? Manara-maso ny tahan'ny fiovam-po 30% mahery ankehitriny, Social Rebate dia sehatra mamiratra. Tsy vitan'ny hoe mampiasa varotra am-bava fotsiny ianao, fa manome tosika ihany koa